बोलेर नसकिने काजोल र बोल्दै नबोल्ने अजयको प्रेम र बैवाहिक जीवन कसरी भयाे ? कस्तो छ त ? | Rochak
September 10, 2021 NepstokLeaveaComment on बोलेर नसकिने काजोल र बोल्दै नबोल्ने अजयको प्रेम र बैवाहिक जीवन कसरी भयाे ? कस्तो छ त ?
अजय देवगन र काजोल को प्रेमपूर्ण यात्राले यस वर्ष दुई दशक टेक्दैछ । छोटोछोटो समयमा छिटोछिटो प्रेमसम्बन्ध भत्किरहने वर्तमान समयमा पनि याे जाेडीकाे सम्बन्ध भने मज्बुत नै छ । त्यसैले उनीहरूलाई बलिउडको आदर्श जोडीका रूपमा लिइन्छ ।
उनीहरू बिचको प्रेम पहिलो नजरको प्रेम थिएन । पहिलो पटक भेट्दा उनीहरूको मन अन्त कतै जोडिएको थियो । समयले उनीहरूको प्रेम छुटायो र उनीहरू नजिक बने । उनीहरूहरू बिच पहिले भेट सन् १९९५ मा ‘हलचल’ सिनेमाको सेटमा भएको थियो। त्यो भेट खासै फलदायी भएन ।
उनीहरूले साथमा काम गरे। त्यतिबेला उनीहरूबिच एकअर्कालाई जोड्ने तार दुबैले भेटेनन् । दुबैको स्वभाव फरक-फरक थियो। दुबैको स्वभाव हेर्दा कुनै दिन यी दुबै प्रेममा हुनेछन् र बिबाह पनि गर्नेछन् भनेर कसैले सोचेका थिएनन् ।
अरूको त कुरै छोडौं स्वयं अजय र काजोलले पनि सोचेका थिएनन् । कारण काजोल ‘हा हो गर्ने, घमण्डी र एकदमै बोलीरहने व्यक्ति’ थिइन्। काजोलको यो बानीले अजयलाई काजोल फेरी भेटनुपर्ने मान्छे जस्तो लागेन ।
अजयका बारेमा काजोलको सोचाइ पनि करिबकरिब त्यस्तै थियो । काजोलको नजरमा अजय ‘अर्कै र गवाँर’ किसिमका थिए। अजयमा उनले कुनै त्यस्तो आकर्षण भेटिनन्। पछि उनीहरुले बिहे गरे र राम्रो सम्बन्धका साथमा जिन्दगी काटिरहेका छन् ।
द कपिल शर्मा शोमा आएका उनीहरुले आफ्नो बारेमा खुलेर नै कुरा गरेका थिए । मेरो सट्टामा काजोल नै बोलिदिन्छिन् भनेर अजयले गरेको ठट्टालाई काजोलले हासेर उडाइदिएकी थिइन् ।
महि नावारी ढिलो हुन्छ ? चाँडो गराउन यी ६ चिज खानुहोस् !
देशभरका ६४ जिल्लामा फैलियो अमेरिकी फौजी किराको प्रकोप